नेताले खाएको देश कहिले नेताहरूको सत्बुद्धि आउला ? हामी जनता कराइरहने नेताहरू सुनेको नसुनै गर्ने कहिलेसम्म ? राजधानीमा सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको फोहोर–मैलाको भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकाहरूमा नेपालका राजनीतिक दलभित्र स्थापित हुनखोजेका केही युवानेताले अस्ट्रियाका ३१ वर्षीय सेवास्टिन क्रुज या फ्रान्सका ३९ वर्षीय म्याक्रोन आदि बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका अभिव्यक्ति प्रस्तुत भइरहेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो ।
कात्तिक २ गते प्रकाशित प्रा. कृष्ण खनालको ‘लोकतन्त्र स्वामित्वको सवाल’ पढेर केही लेख्न मन लाग्यो । लेखकले कांग्रेसमाथि लगाएका आरोप सही छन् । तर कांग्रेसको त्यो हविगत राजालाई काखी च्यापेको सजाय थियो ।
पहिलो संविधानसभा, दोस्रो संविधानसभा र स्थानीय तह निर्वाचन शंका र उपशंका बीचमै सम्पन्न भएको हो । बेला–बेलामा कुरा फेरिरहने राजनीतिक दलको व्यवहारले शंका र उपशंकालाई बल पुर्‍याएको हो ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर प्रजातन्त्र सुदृढ गर्दै जानुपर्नेमा शेरबहादुर देउवा र केपी होली दुवै नेताले दुवै पार्टीलाई कतातिर लगिरहनुभएको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । कोही दरबारिया शक्ति र कोही निरंकुश व्यवस्था चाहनेलाई काखी च्यापेर हिँड्ने गर्नाले आज लोकतन्त्र खतरामा परेको छ ।
असोज ३१ गते प्रकाशित ‘अक्सफोर्डलाई चन्द्रशमशेरको उपहार !’ समाचार (१० पृ.) चाख मानी पढियो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलाई श्री ३ चन्द्रशमशेरले बनारसको एउटा निजी पुस्तकालयका तीन हजार थानभन्दा बढी पुस्तक खरिद गरी पठाएका थिए भनी इतिहासविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. शङ्कर थापाले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको एउटा कार्यक्रममा हालै बोलेको कुरा त्यस समाचारमा लेखिएको रहेछ ।
नेपालीहरूको दुई ठूला चाड दसैं र तिहार सकियो । श्रद्धा र आस्थाका साथ मानिले तेस्रो ठूलो चाड छठको पूर्वसन्ध्यामा छौं । स्वागत पनि गरिहेका छौं । हाम्रा यस्ता चाडवाडले प्रत्येक नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गर्छ ।
नेपाल कला र संस्कृतिका लागि उर्वर भूमि हो । हरेक पर्वका आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व रहँदै आएको छ । यस्ता पर्वले बिभिन्न जातजाति, भाषाभाषी तथा धर्म र संस्कृति बोकेका नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको विश्वास गरिन्छ ।
ईपीजीद्वारा सीमा नियमन गर्ने प्रस्ताव
ईपीजी बैठक र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी मेरो लेखबारे डा. शिवशंकर यादवले सीमा नियमनले सिर्जना गर्ने झन्झट शीर्षकमा कात्तिक ३ गते प्रतिक्रिया लेख्दै ‘नियमन प्रस्ताव भारतले गरेको भनियो, यो के हो ?’ भनेका छन् ।